Hei, vanoenda sei vanoona, ndinofunga kuti zvave zvichitambudza vazhinji venyu imi kusanganisira ini, ndichiedza kugadzirisa Aunti yeGmail yakaipa pafoni dzedu uye PC muChrome kana Gmail. Kune avo vane nhamba yakawanda yeGmail uye zvichida imwe yebasa uye imwe yekushandiswa kwega, zvakajeka kuisa Akaunti yako yeGmail yakasarudzwa seIndangariro uye unogamuchira zviziviso kubva kuAkinyana yeGmail iri kupi zvako, chero nguva, pasina kushungurudzika.
Iye zvino, kana uine kero imwechete yeAgmail uye iwe unoda kuita kuti mumwe wako arege kushandiswa pafoni yako kana paPC yako ipapo matanho andakaisa pasi apa achakubatsira nekugadzirisa nekugadzirisa Aunti yeGmail iri muGoogle kana Gmail. Ingonditevera pedyo uye iwe uchawana mufananidzo wose uye zvichida kubatsira mumwe waunoziva kuburikidza nemamiriro ezvinhu akafanana mune ramangwana.
Nzira yekushandura Dhigirii yeGoogle Gmail muChrome neGmail pane PC
Zvakanaka, vanhu, kana iwe uchida kuziva kuti ungashandura sei Gmail isina kukwana muGoogle Chrome kana Gmail pane PC yako iri nyore uye iri nyore kwazvo kuwana. Izvi zvinokubvumira kuti ugone kuisa yako Gwaro reGmail Rakawanda kakawanda sezvaunogona kufadza. Ndakatarisana nekudzvinyirira uye kurwisana kwekuedza kuisa Aunti yeGmail yeDefault this process ini uye inoshanda, zvakanditora nguva kuti ndizvione asi pakupedzisira, ndakazviita.
1. Tsvaga "www.google.com" pane yako Chrome browser.
2. Dzvanya pamufananidzo wemifananidzo, pakona yepamusoro yepamusoro peji google.
3. Dzvanya pa "Google Account" uye ichakutora kune Tab itsva.
4. Dzvanya pa "chiratidzo mukati" tab kumusoro kwekona yepamusoro peji. Izvi zvinokutora iwe kune chinyorwa chitsva.
5. Dzvanya pane zita rako reAkunti, nemuseve unotarisa pasi parutivi.
6. Zvadaro pota pa "Shandisa imwe Aunti" uye wobva wawedzera Aunti yako yeGmail. Izvi zvichangova Account yako yakakwana chero kupi zvako, chero nguva.
Pamusoro peGmail iri nyore kwazvo, zvawakaita paGoogle chrome kubva paPC yako zvichaenzanirana neA Gmail yako. Saka, kana iwe ukaedza kupinda muGmail yako, iyo Account itsva yawakachengeta uye yakangoerekana yakagadziriswa, ichava iyo Account iripo pane yakasara pa Gmail yako.
Nzira Yekushandura Akaunti yeGmail yakafa mu Chrome kana Gmail pane Mobile yako.
Kuisa Aunti yako yeGmail yeGoogle mu chrome kana Gmail inongova nyore sezvazviri paPC asi kunyange, zvishoma zvakaoma. ICC inonyanya nyore nyore nokuti ine chinyorwa chikuru uye zvese zviripo zvinogona kuwanikwa.
1. Dharira uye uzarure yako Google Chrome pane Mobile yako.
2. Tsvaga "www.google.com" pane imwe itsva tab.
3. Dzvanya paAclick picture icon kumusoro kwekona yepamusoro peji rako reGoogle.
4. Dzvanya pa "Gadzirisa maakaunti" uye izvi zvichakutora kune rimwe diki.
5. Dzvanya pa "Wedzera nhoroondo" kana Bhodha yawedzera pane "Add account" uye uwedzere nhoroondo yako ye Gmail.
6. Chimirira kuti foni yako ipedze kutarisa kuIndaneti. ipapo shandisa mazita eakaunti yako munzvimbo dzakakodzera uye urambe uchidaro.
Kana izvi zvaitika, iyo nhoroondo itsva yaunowedzera ichangova iyo account yako yeGmail chero nguva iyo uri kushanda ne Gmail pafoni yako kuburikidza neChrome. Izvi ndizvo chaizvo nzira yangu iri nyore paIndangariro yekugadzirisa kana kushandura Gmail account yakakwana paChrome kana Gmail pane PC neTerefoni.
Iye zvino, zvawakaita paGoogle Chrome pafoni yako zvingave zvisingatauriki kana kuenzanirana neAmail yako neGmail App o yako yaunofamba. Saka kuitira kuti uone kuti iyo Gmail yako itsva iri kushanda paGmail App, uchafanira kuwana Gmail yako App uye uwedzere iyo nhoroondo itsva nayo. Maitiro mashomanana pasi apa achakubatsira kuita izvi zvinobudirira.
1. Vhura Gmail yako App pafoni yako.
2. Dzvanya pane bhokisi remenu pane kona-kuruoko rwekona yekrini chako.
3. Svetuka kusvika kuona zvingasarudzwa pasi apa.
4. Dzvanya pazvigadziro uye wozorora pa "Wedzera nhoroondo" kuti uwedzere nhoroondo yako ye Gmail.
5. Izvi zvichakutora iwe kudikanwa kweAunti muzvirongwa zveGoogle App apo iwe uchagadzira email, bhura o "Google" kuti uwedzere nhoroondo ye Gmail.
6. Mirira kuti foni yako ipedze kuongorora Info. sezvinowanzoitwa uye ozoisa zvinyorwa zvako zvitsva zvekare uye zvinoenderera mberi.
Kana iwe usina kutora Google Account itsva ikozvino, nzvimbo yaunotumira mazita e-akhawunti yako, pane sarudzo pasi apa kuti iwe ugadzire nhoroondo yeGoogle kana iwe usina.
Pakupedzisira, kuisa nekushandura maAgmail yeGoogle asina kukwana paChrome kana Gmail pane yangu PC uye Mobile zvakanaka nyore, tevera matanho andakaisa pasi apa uye iwe uchabudirira kuisa maakaunti akawanda eGmail pane PC yako uye mobile. Ndinokutendai nekuona nyaya ino. Ndinotarisira kuti wanyatsonzwisisa zvose zvandakataura uye ndinozvishandisa kuti ndigadzirise nhoroondo yako yeGmail nyore uye nekukurumidza sezvinobvira.
10 Yakanakisa Gmail Wedzera-Ons uye Kuwedzeredza Kuti Uwedzere Kugadzira Kwako Pabasa